Fetin’ny Pentekosta : nihavitsy ny mpitsangantsangana, nahasarika ny tanora ny fampisehoana tetsy sy teroa | NewsMada
Par Reflets sur 22/05/2018
Nanamarika iny fetin’ny Pentekosta iny ny hatsiaka mamirifiry, izay midika fa miditra ny ririnina. Asa, noho izay andro mankalaina izay angaha fa vitsy kokoa ny fianakaviana nivoaka ny Renivohitra, raha oharina tamin’ny Alatsinain’ny Paska. Ny tanora kosa, etsy ankilany, tsy voatana mihitsy. Porofon’izany ny fahamaroan’izy ireo, nijery ireo fampisehoana samihafa. Tao ambadik’izany rehetra izany, nitranga ny loza, izay tsy mba nampilaza na niandry ny fahataperan’ny fety. Ndeha hojerena an-tsary ireo rehetra ireo !
Efa ela ihany koa tsy nihaona tamin’ny mpankafy azy, eny Ivato sy ny manodidina, ry Rossy. Fotoana namerenana indray ny fiarahana, ny tamin’iny omaly iny. Ankoatra ity tarika ity, teny ihany koa ny mpanakanto goavana samihafa, toa an’i Nina’s.
Tsy toy ny tamin’ny Alatsinain’ny Paska fa tsy dia nisy fitohanan’ny fiara loatra, omaly maraina. Anisan’ireo vitsivitsy tsy voasakan’ny hirifirin’ny andro ka nandeha nitsangantsangana ireto fianakaviana ireto.
Toy ny amin’ny fety rehetra, misy hatrany ny fiarahana mifaly sy « misotrosotro kely » eo amin’ny mpianakavy, mpinamana, sns.
Hipoka avokoa ny ankamaroan’ny fiangonana, tamin’ny alahady teo. Nisongadina ny fanamasinana na fizarana sakramenta samihafa : batemy, kaomonio voalohany, fandraisana ho mpandray ny fanasan’ny Tompo, konfirmasiona, sns.
Tsy nisy ifandraisany loatra tamin’ny fetin’ny Pentekosta, nefa azo lazaina ho niavaka ny fampisehoana « Mendrika live », tetsy amin’ny CGM Analakely, ny asabotsy teo. Niarahana tamin’i Mendrika, i Tahiana Vibe, i Mika, i Lova, i Mahefa, ary ny vahiny hafa izy ity.
Maro tamin’ireo mpitsangantsangana no efa nitondra akanjo mafana, niova tampoka ny toetr’andro ny tapak’andro hariva.
Tsy diso anjara ihany koa ireo ankizy ireo, tomefy olona ny teny amin’ny zaridaina Ambohijatovo, nifaly hafanja avokoa izy ireo.
Ny hariva alatsinainy, nifanotofana ny fiara fitaterana, ny andro mihariva ny olona mihatomefy.
Nanatontosa : Landy R., Fanou, Mamiherison